Ogaden News Agency (ONA) – Warmurtiyeed kasoo baxay shirweynihi OYSU Pacific Iyo Maamul Cusub
Warmurtiyeed kasoo baxay shirweynihi OYSU Pacific Iyo Maamul Cusub
Go’aamadii & Baaqii Shirweynihii 2aad ee ururka OYSU Pacifica
14-15July 2012 Perth Australia
1) Soo bandhigida qadiyadda iyo tacadiga kajira Ogaadeenya.
2) Xoojinta xiriirka u dhexeeya ururka iyo ha’adaha u olaleeya xuquuqul insaanka.
3) Kobcinta aqoonta xubnaha ee ah sooyaalka Soomaalida Ogaadeenya.
4) Ilaalinta akhlaaqda, dhaqanka iyo hidaha toolmoon ee Soomaalida Ogaadeenya.
5) Kobcinta iyo sare u qaadidda tayada xubnaha ururka.
6) Ilaalinta ururnimada iyo midnimadda xubnaha dhaxdooda ah.
7) Da’yarta oo lagu soo barbaariyo qadiyadda Soomaalida Ogaadeenya.
8) Urruku waxuu isku raacay ookale in loo kasbo loona sameeyo saaxiibo ajinabi ah qadiyadda somalidda Ogaadeenya.
9) Adkaynta wadashaqaynta iyo xiriirka ururka dhaxdiisa ah.
10) Socdaal in loo galo gobaladda uusan ururku ka hawlgalin lagana soo dhiso xubno.
11) Xoojinta xiriirka iyo wadashaqaynta u dhaxaya ururka iyo qaybaha kale ee ay kakoobantahay jaaliyaadka Somalidda ogaadeenya.
12) Ardayda katirsan ururka in ay kusoo bandhigaan qadiyadda skuulada iyo jaamacadaha ay dhigtaan.
13) Kor u qaadidda barnaamijyada ururka uu uqabto bulshada sida kuwa waxbarashadda iyo kuwa samaflka ahba.
1) Shirka ururka OYSU Pacific wuxuu canbaaraynayaa xasuuqa & dambiyada bani’aadaminimo ee Gumaysiga Itoobiya mudada dheer ku hayay dadweynaha aan waxba galabsanin ee Soomaalida Ogaadeenya.
2) Shirka ururka OYSU Pacific Wuxuu si gaar ah u cambaareenaya bahdilka & ku tumashada joogtada ah ee lagu hayo Wariyayaasha, Ugaasyada, Waalidiinta, Waxgaradka iyo Culamaa’udiinka magaca ku leh bulshada oo uu si gaar ah gumaysigu u raadasdo una ciqaabo.
3) Shirka ururka OYSU Pacific wuxuu si way u cambaareenayaa tacadiyada dowlada Itoobiya ay ku hayso da’yarta iyo ardayda aan waxba galabsan ee ay kamidka yihiin xabsi utaxaabidda iyo dilka joogtada ah qof aanan dambi galin.
1) Shirka ururka OYSU Pacific wuxuu Beesha Caalmaka ugu baaqayaa in ay Shacabka Soomaalida Ogaadeenya ku tageeraan qadiyadiisa xaqa ah, isla markaana gumaysiga Itoobiya kula xisaabtamaan dambiyadda dagaalka & Dambiyadda bani’aadamnimo ee ka dhanka ah shacbka dulman ee Ogaadeenya.
2) Shirka ururka OYSU Pacific wuxuu Shacabka Soomaalida Ogaadeenya ee Geesiga ah ugu baaqayaa in ay midnimadooda xoojiyaan gudo & dibadba, darar horleh galiyaan sidii ay uga hoosbixilahaayeen gumaysiga dhiigyacabka ah ee Itoobiya.
3) Shirku wuxuu Amaan & Bogaadin u soo jeediyay guud ahaanba muwaadiniinta Soomaalida Ogaadeenya gaar ahaanna ururka OYSU iyo sida wanaagsan ee ay hawlaha halgan ufulinayaan gudo iyo dibadba.
Gudiga Fulinta Cusub ee OYSU Pacific 15 July 2012
XOGHAYAHA: Ahmed Ayub
KU XIGEENKA XOGHAYAHA iyo HOGAANKA DHAQAALAHA: Lul Abdi Ibrahim
XOGHAYNTA: Naciima Maxamad Ismacil
HOGAANKA ABAABULKA IYO WARFAAFINta: Ahib Sheikh
HOGAANKA XALINTA, DABAGALKA IYO ARIMAHA URURKA: SH. ABDULQADIR ALI GURAY
HOGAANKA Arrimaha Dibada: Yahye Sheikh Abdi
Faafin: Ogaden News Agency